Ejila euro na ngwa ngwa na iPhone ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Ejila euro na ngwa ngwa na-ebu iPhone ọhụrụ
Gaa n'ihu, onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike iji ego ya mee ihe ọ bụla anyị chọrọ, mana anyị echeghị na ọ bara uru itinye nnukwu ego na chaja ndị ọrụ Apple ngwa ngwa a. anyị na-ele anya na nsonaazụ ule sitere n'aka ndị ọrụ dị iche iche na ndị mmepe dịka Dan Loewenherz.
Ihe anyị na-ekwu na nke a bụ na ụgwọ ngwa ngwa nke Apple na-enye anyị abụghị otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa yana naanị ndị nwere iPad na chaja mbụ ya ma ọ bụ chaja na-enye ihe karịrị 5W nke iphone nyere. chaja, Ọ ga-enweta ihe dịka otu nsonaazụ dị ka a ga - asị na anyị ejiri euro 80 na eriri na chaja USB C mbụ site na ụlọ ọrụ Cupertino.
Ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ Apple na-eche maka iPhones ha ma ọ bụ eziokwu na ha ewerela oge iji tinye ya, mana ọ mechara rute. N'ọnọdụ niile a ngwa ngwa ụgwọ nwere maka ahụkebe ikpe nke anyị nwere obere oge na-ana iPhone na n'ihi nke a, ọ dị mkpa na olu na-ebu ibu bụ nke kachasị na oge kachasị dị mkpirikpi. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịhụ na ule ndị dịlarị na netwọkụ mmekọrịta na vidiyo na YouTube ma ọ bụ ndị yiri ya, mana ọ bụrụ na ị nwere chaja iPad nke na-enye 12W ma ọ bụ ọbụlagodi chaja Mac, ịkwesighi itinye ego n'ụdị chaja a ebe ọ bụ na ị ga-enweta otu nsonaazụ dịka ịzụta ihe ọhụrụ site na Apple.
Ihe dị iche n'etiti otu na nke ọzọ dị obere ma gbakọọ ya na chaja iPad na iPhone na 29 ma ọ bụ ọbụna 61W USB chaja bụ naanị 5 karịa nkeji iji ruo 50% nke ụgwọ. Nke a pụtara na Nchaji ugboro bụ ihe fọrọ nke nta na ndị a chaja na Ọ ga-sonso were 5 ọzọ nkeji iru ọkara ụgwọ nke iPhone na iPad chaja na ọ bụrụ na anyị ejiri chaja USB-C mee ya na nkwụnye azụ ma ọ bụ eriri Lightning iji jikọọ iPhone.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-akpali mmasị bụ na Apple gbakwunyere chaja ngwa ngwa na iPhone ọhụrụ, ma 8 na 8 Plus na iPhone X ọhụrụ. ọ kasị mma mgbe niile na-ebu ukara Apple chaja iji zere nsogbu, ma obughi na onu ahia obula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ejila euro na ngwa ngwa na-ebu iPhone ọhụrụ
Fernando Martin dijo
Zaghachi Fernando Martín
OZO, ekwe ntị ekwe ntị na ntị ntị eruola
'Onye nwe igwe nwere ike inwe' TV nke ya